Sajhasawal.com.np |शिक्षकको विज्ञापनमा कतिले दिए आवेदन ?
काठमाडौँ - KTM / शिक्षा
शिक्षकको विज्ञापनमा कतिले दिए आवेदन ?
माघ १३, काठमाडौँ | स्थायी शिक्षकका लागि दुई लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्नमाध्यमकि र माध्यमिक तहमा गरी साढे १७ हजारका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा कुल साढे दुई लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । यो कुल मागभन्दा १२ गुणाले बढी हो । प्राथमिक तहमा आवेदन दिने समय अझै बाँकी रहेकाले यो संख्या थप बढ्ने छ ।
आयोगका अनुसार, सबैभन्दा धेरै आवेदन प्राथमिक तहमा परेको छ । आवेदन दिने म्याद चार दिन बाँकी हुँदा प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक बन्न ९७ हजार २९ जनाले फाराम भरिसकेका छन् । निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा ८६ हजार ९१४ र माध्यमिक तहमा ३६ हजार ५५२ को आवेदन परेको छ ।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय त्रिविले नमान्ने (विज्ञप्तिसहित)
नेपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट मागियो अतिरिक्त शुल्क, नदिए परीक्षामा सामेल नगराउने धम्की
एसईईका प्रश्नपत्रमा त्रुटि